Farmaajo oo Faray Xukuumadda inay Dardargeliso Howlaha Horyaala Ka Hor 2020 | SAHAN ONLINE
MUQDISHO-Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo guddoomiyay shirka toddobaadlaha ah ee Golaha Xukuumadda ayaa sheegay in Golaha Xukuumadda looga baahanyahay in ay la fal galaan shacabka, si ay u helaan xogo dhammaystiran oo ka turjumaya baahiyaha bulshada.
Wuxuu ku amaray xukuumadda uu hoggaamiyo Ra’isul wasaare xasan cali khayre in ay ansixiyeen hindise sharciyeedka doorashooyinka ansixiyaan, una gudbiyaan baarlamaanka federaalka ah, una daba-galaan, si doorasho uga dhacdo Soomaaliya 2020-ka.
“Waxaan ka hadalnay inclusive politics oo ah siyaasadda loo dhanyahay, waxaan idiinka codsanayaa usbuuca soo socda in aad ansixisaan sharciga doorashooyinka, si annaga ay nooga dhammaato xukuumad ahaan, oo sanadkan dhammaandkiisa ay baarlamaanki u ansixiyaan si uusan waqti nooga lumin, in aan ku daba galno golaha shacabka, oo si doorasho loo qabto 2020-ka ay ansixiyaan sharcigaas”.
Wuxuu kula dardaarmay Xubnaha Golaha in ay hormuud ka noqdaan ka qeyb qaadashada Olalaha Isxilqaan ee dib loogu dhisayo dalka, isagoona tilmaamay in ay waajib ku tahay Madaxda Qaranka in ay tusaale wanaagsan u noqdaan shacabka.
Madaxweyne Farmaajo ayaa Golaha Xukuumadda uga warbixiyey safarkii dhawaan uu ku tagay magaalada Marka ee Gobolka Shabeellaha Hoose iyo baahiyaha bulsho ee ka jira deegaannadaas.